चीनमा अर्को रोगको प्रकोप, तीन हजार बढी व्यक्ति संक्रमित, रोग के हो ? कस्तो हो ? – Himshikharnews.com
५ आश्विन २०७७, सोमबार २३:२५
विश्व अहिले कोरोनाभाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । चीनको वुहानबाट कोरोनाभाइरस फैलिएको मानिन्छ ।
यो रोगको उपचार सम्भव छ ।
यो घटना बाहिर आएपछि सोही वर्षको डिसेम्बर ७ मा कारखानाले खोप उत्पादनको काम पूर्णरुपमा बन्द गर्‍यो । त्यस घटनाको लागि जिम्मेवार ठहरिएका आठजनालाई सजाय दिएको बताइयो ।
त्यस्तो रोग देखिएको अवस्थामा जनावरबाट सकेसम्म टाढा रहनुपर्दछ । जनावरको नजिक जानुपर्दा आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्दछ । मासु खानुअघि विचार पुर्‍याउनुर्छ । दूध र पानी उमालेरमात्र पिउनुपर्छ । घर वरपर कीटाणुनाशक छर्किनुपर्दछ, सफा राख्नुपर्दछ ।-imagekhabar.com